I-Mystras, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Mystras
Bukela ividiyo emayelana neMystras
Hlola i-Mystras, idolobha elincane e Greece futhi ube yi-knight noma inkosazana yezindaba zakho zobuntwana kuleli dolobha laseByzantine. Vakashela edolobheni eliyimfihlakalo laseMystras, esifundeni sasePeloponese, esise6km NW yedolobha laseSparta, futhi uzivumele uthandwe ubukhazikhazi balesi sikhathi sokufika.
Mangaza ngokuzungeza idolobha elihle kakhulu futhi uzwakale lapho kuthula ubukhazikhazi bomuzi: iSigodlo SamaDespots (i-Anaktora), izindlu zeLaskaris neFrangopoulos, iSonto Elikhulu laseSanta Dimitrios namaMonasteries amahle weLady Lady Pantanassa, kanye ne-Οur Lady I-Perivleptos.
I-Stroll yokuzilibazisa ngeKástro (iDolobha laseFrankish), Idolobha Eliphezulu kanye neDolobha Eliphansi izakhiwo zalo ezakha iphupho. Ngamehlo akho engqondo yakho zibone ngeso lengqondo izikhulu namakhosazana angamaFrank ahlala ezindlini eziphakeme; izihambeli zakwamanye amazwe zifika ziphethe izipho, nabalimi, abahambeli noma abahwebi begcwalisa imigwaqo ephithizelayo.
Ukubaluleka komlando waMyasto kuyamangalisa. Ngekhulu le-14th i-Mystrás yaba yisihlalo se-Despotate yaseMoreas, kwathi e1448 inkosi yokugcina yaseByzantium, uConstantine XI Palaeologos, wabekwa umqhele lapha. Ukuvakashela iMnyuziyamu ye-Archaeological kuzokusiza uthole ukuqonda okujulile ngomlando ocebile wale ndawo.
Woza uphile iphupho.